Emva kokurhoxisa iLifa likaJupiter, ngaba kufanelekile ukuba iNetflix ishiye amaqhawe?
Ukucinywa kwelifa likaJupiter kule veki- okanye ubuncinci, isiqinisekiso sokuba alizukubakho ixesha lesibini, kodwa endaweni yoko umboniso oqhagamshelekileyo obizwa ngokuba ziiSupercrooks - n wawungalindelwanga ngendlela engummangaliso. Ngokuyinxenye kungenxa yokuba siye sasebenzisa ukurhoxisa imiboniso kwiNetflix, nangona zibonakala zikwisikhundla esihle kwiitshathi eziphezulu ze-10. Kodwa iLifa likaJupiter alikhange liye kubagxeki, nangona besicinga ukuba ixesha lesibini linamandla amaninzi ngokusekwe kwi- ukuphela kwexesha lokuqala .
I-Hollywood Reporter's Borys Kit , umboniso waxabisa i-200 yezigidi zeedola ukwenza. Kwakukude kakhulu: Imifanekiso yoluhlu yayikhutshwe kwangoko ngoJulayi 2019. Yayikukuzibophelela okukhulu kwiseti ye-superhero engaziwayo, kwaye ngokucacileyo ayikhange ihlawule ngokwaneleyo ukuba iNetflix isuke apho. ixesha lesibini.
Ke yintoni nae engasebenzi? Ngokunyaniseka, isibhengezo sale veki sidide kakhulu. Ngokuqaphelekileyo,
Umhla wokugqibela ibali elikhethekileyo kwiJupiter's Ukunyamalala kweLifa alizange lisebenzise igama elithi "rhoxisa" okanye "lirhoxisiwe" - kodwa ukukhulula abadlali kwizivumelwano zabo kwaye bangenzi ixesha lesibini ngokuyintloko yinkcazo irhoxisiwe inkqubo kamabonwakude.
Asiphikisani nombono womnye umboniso osetiweyo kwindalo enye, kwaye sijike iLifa likaJupiter libe yingqokelela. B kodwa kunzima ukungazibuzi - ukuba lo mboniso ubuphumelele ngenene, ngaba iNetflix ibingayi kwenza okungaphezulu? ukuba baya kubuyela kwilifa likaJupiter kwixa elizayo, kunye nomhla obekiweyo ecacisa imithombo yokuba angabuya ngenye indlela. Kwakhona, nangona kunjalo: iNetflix ibinokhetho lokwenza okungakumbi ngalo mboniso kwaye bakhetha ukungayenzi.
MnaUmdlalo obalaseleyo weNetflix
Into esiyaziyo malunga
nezinto ezingaqhelekanga zonyaka 4
Ixesha leWitcher 2 elichaziweyo
Umxholo omkhulu kakhulu?
(Ityala lemifanekiso: iNetflix)
Kunzima ukungazibuzi ukuba iLifa likaJupiter lalinonyaka emva kwexesha kakhulu kwimarike. Kwilizwe apho ngoku sinemiboniso emibini kunye nexabiso elibizayo leMarvel TV kwiDisney Plus - elungileyo kunye
enye eneziphumo ezixubeneyo
- Umboniso weNetflix ujongene nothelekiso olunzima kunye namaqhawe angaphezulu .
Uhlengahlengiso lweencwadi ezihlekisayo ezikwisikrini esincinci zivela kude ukusukela ngo-2012, xa i-Arrow yayiyeyona nto iphambili kulo mdlalo edolophini, kwaye iNetflix yakhuphisana nomsasazi oneepokotho ezinzulu kakhulu kunye nabalinganiswa esele betyalile . Imiboniso bhanyabhanya ye-Superhero iyakhawulezaSele ilugqatso lweengalo phakathi komsinga, kunye ne-HBO Max inika ukukhanya okuluhlaza kwimiboniso ye IGreen Lantern
, iBatman kunye neQela lokuZibulala. Ukumangaliswa, okwangoku, kubonakala ngathi kutyalwe imali ukwenza iinkqubo zayo zikamabonwakude zisebenze njengakwimiboniso bhanyabhanya. Lilonke, silindele ukuba kuboniswe imiboniso emithandathu ye-MCU kulo nyaka, ngo-
kunye noNks uMarvel abeke umva ngasekupheleni kuka-2021. Eso sisihlwele esixakekileyo- kwaye oko akubali nemiboniso yonke. I-Arrowverse, njengeFlash kunye neSuperman kunye neLois.
Ilifa likaJupiter, emva koko, alinakubamba, kunye ne-38% yohlolo oluqinisekileyo oluvela kubagxeki kwiitamati ezibolileyo.
Ngokwenyani, asicingi ukuba ukugcwala kwe-superhero ngumba, apha-jonga nje ukuba kubi kangakanani na
Idatha engenakoyiswa yedatha eye yabakho kwiAmazon Prime Video, utsalela ingqalelo kuyo. ukujija kwegazi kunye nesimbo sokubonakalayo esigalelweyonime. Le yahlula igama elikhulu, nangona kunjalo, kwaye isekwe kwincwadi ehlekisayo eyaziwayo eneminyaka eli-15 yembali.
Imithombo yolwazi yelifa likaJupiter yinto eyomeleleyo ngokwaneleyo ukuba ingalungelelaniswa, ngokujonga nje. UMillar uye wanandipha impumelelo engazange ibonwe ngaphambili njengomyili weencwadi ezihlekisayo zangoku kwaye usebenze nabanye babaculi ababalaseleyo behlabathi. Ilifa likaJupiter yayikukusebenzisana noFrank Quitely, ngokuqinisekileyo lelona gcisa lilungileyo kwisizukulwana sakhe. Umxholo-wamaqhawe avelisayo kunye nemiceli mngeni yokudlulisa itotshi-intle kakhulu, kwaye ayisiyiyo into esiyibonileyo ehlengahlengiswe kwiscreen ngaphambili. Kwiphepha, bekufanele ukuba kusebenze.
Ekugqibeleni, kuphela yiNetflix kuphela eyaziyo ukuba kutheni iJupiter's Legacy ingafanelekanga ukuba ihlehliswe- kwaye umsasazi waziwa kuphela ngamanani abaphulaphuli xa ethetha ngomkhulu wakhe omkhulu. NgokukaNielsen (nge THR
), loo ntoNdilinganisela ukulinganiswa eUnited States ngokusekwe kwisampulu yabaphulaphuli, iLifa likaJupiter yayingoyena mboniso uboniswe kwiveki yokuqala. Imizuzu engama-696 yezigidi yajongwa ngoMeyi 9 (umboniso waqala ngoMeyi 4).
Eli nani alivakali libi- kodwa alisixeleli ukuba bangaphi abantu abagqibileyo ukubukela wonke umboniso, okanye banikezele emva kwesiqendu esinye okanye ezibini, ngenxa yoko kuphele ukusetyenziswa.
Kunzima ukutsho ukuba ngabaphulaphuli benzani ngeLifa likaJupiter xa lilonke, kwaye kude kangakanani umboniso othathe inkcubeko ngokubanzi. Ngokujonga nje, umboniso wawunamanqaku asezantsi omsebenzisi we-6.8 kwi-IMDb yabasebenzisi abangama-25,000, xa kuthelekiswa no-7.2 we-Falcon kunye ne-Soldier yasebusika yabasebenzisi abangama-106,000. Kwiitamatisi ezibolileyo, nangona kunjalo, nganye inamanqaku afanayo oMsebenzisi o f 7.2. Akukho nto ingako sinokuyifunda koku, kwaye silindele ukuba uMarvel itsala iivoti ezingaphezulu komsebenzisi kunokunikezelwa kweNetflix.
Ukurekhoda, kubonakala ngathi uthotho luphumelele inkcubeko efanayo njengenye iNetflix ebetha ngathi iBridgerton okanye
, okanye iMare yaseMpuma yeDolophu yeHBO-thina Ayisiyi kuseki nakweyiphi na idatha, ukuze icace. Kodwa ayivakali ngathi umboniso uqhume ngokwenkcubeko indlela
ayenzele iAmazon Prime Video kwi2019, omnye umboniso osekwe kwipropathi engeyiyo yeqhawe .Marvel kunye neDC.
Ngamanye amaxesha ezi zinto zithatha ubomi bazo, njengee-gifs zikaHelmut Zemo zokudanisa kwiklabhu yasebusuku. Ayivakali ngathi lo mboniso ufikelele kwelo nqanaba. Oku kuthetha ntoni ngeNetflix?
Nanini na xa iNetflix irhoxisa umboniso, iimpendulo kwimidiya yoluntu ziyafana- kutheni utyala imali uthotho olutsha lweNetflix, ukuba ndiNgaba le nto iza kuyilungisa kuphela? Kubonakala ngathi uphononongo olufanelekileyo. Kutheni ungenzi uthotho oluvaliweyo ukuba awuqinisekanga ukuba unayo imali yokugqibezela ibali?
ukusukela ukuba iNetflix yibhokisi yeedrama ezimbini eziphambili ngokulandelelana
kunye neLifa likaJupiter , indlela yayo yokurhoxisa ibonwa ngakumbi kunangaphambili. Ukusuka kwimbono yababhalisi, kukho ukudana okuqinisekileyo kutyalo-mali kumdlalo kwaye emva koko uyibone ithatha izembe.
Umntu uyazibuza ukuba ingakanani iNetflix ebeka umqobo kwimpumelelo- kwaye ukuba iyawenza umahluko ukuba umboniso ucotha ufumanisa abaphulaphuli ngokuhamba kwexesha, ngakumbi ukusukela oko iIrregulars kunye neLifa likaJupiter babenezembe kwiiveki nje ezimbalwa emva kokuqala kwabo. Uvavanyo lwangaphakathiisincoko siya kuba
ukulungelelaniswa kweNeil Gaiman's Sandman comics
, uthotho olunophawu lwenkcubeko olukhulu ngakumbi kunamahlaya eLifa likaJupiter. Siyazi ukuba lo iya kuba ngumboniso obizayo, kuxhomekeke kubadlali. Inenzuzo ephindwe kabini yokusekwa kwincwadi yamahlaya yamashumi eminyaka eyaziwayo kunye nomsebenzi wombhali odumileyo ovela eGaiman. Kwinqanaba lophawu olubonakalayo, inika iNetflix enye yencwadi ehlekisayo enokuthi ivelele, ngakumbi xa kwiminyaka embalwa ezayo izaliswe yimiboniso yeTV yeMarvel neDC.
Ayisiyomboniso wamaqhawe kakhulu-kwaye phakathi kokurhoxiswa kwamva nje kunye nokulahla imiboniso yayo yeMarvel kwiminyaka embalwa edlulileyo, kuvakala ngathi iNetflix ayenzanga gingci kolu hlobo ngoku. Hayi, mhlawumbi ilizwe leJupiter's Legacy liza kuxhonywa kumjikelo wesibini wenqakuimbono yabangendawo. Kithina, besinokuyithanda into yokuba iNetflix ibiye kwisizini yesibini yalolu tyalo-mali kutyalo-mali oluninzi, ukubona nje ukuba ingazifumana iinyawo zayo ngobuchule- kodwa ngokucacileyo oko bekungafanelekanga ukuba kubenjalo.
Ezona nkonzo zisasazwayo zithelekisiwe
Ukuthunyelwa kokutya kunye nokusela kwi-eu kwehle phantse ngesiqingatha kwikota yokuqala
2021-06-20 12:57:26 | Entsha
Ubhubhane kunye neBrexit zichaphazele ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kwiinyanga ezintathu zokuqala zonyaka, ngokweFood and Drink Federation. ...
Covid: ukuphazamiseka kotyando kuya kuchaphazela izigidi
2021-06-20 12:54:11 | Entsha
Kwakukho iinkqubo ezimbalwa ze-1.5 yezigidi kwi-2020 kunokuba bekulindelwe, ngokophando olwenziwe eNgilane naseWales. ...
Covid: bonke abantu abadala abanokubhukisha ugonyo lwe-coronavirus e-england
2021-06-20 12:52:26 | Entsha
Nabani na oneminyaka eli-18 nangaphezulu kweli lizwe ngoku angenza idinga lokugonywa okokuqala. ...
Ukukhululeka kokutshixeka: itheko lomtshato liya kugwetywa ngobungakanani bendawo leyo
2021-06-20 12:50:39 | Entsha
Inani labantu abanokuzimasa itheko lomtshato ngaphakathi liza kuxhomekeka kubukhulu bendawo leyo. ...
Ingcwaba likaMargaret Keane: Ukuzama ukuyeka 'ukucalula' i-Irish Epitaph
2021-06-20 12:48:55 | Entsha
Isigwebo sangaphambili esichasene neminqweno yosapho sasisekwe kukhethe lobuhlanga, ngokwesigqibo. ...
UNobhala Wezobulungisa uRobert Buckland Uxolo Ngokungaphumeleli Kwamaxhoba Okudlwengulwa
2021-06-20 12:47:25 | Entsha
"Kufuneka senze ngcono kakhulu, " utshilo uRobert Buckland, ngelixa esenza izicwangciso zokulwa namazinga asezantsi okugwetywa. ...
Ukuxolisa kumaxhoba odlwengulo kubalulekile, kodwa zizenzo ezibalulekileyo
2021-06-20 12:45:20 | Entsha
Isigqibo sikanobhala wezobulungisa sokucela uxolo esidlangalaleni kuwo onke amaxhoba odlwengulo ngumzuzu obalulekileyo. ...
Amaxhoba odlwengulo: kubiza ubungqina obubhalwe kwangaphambili ukuba busetyenziswe kwizilingo
2021-06-20 12:43:50 | Entsha
Ukubona abatyholwa ubuso ngobuso enkundleni kubangela uxinzelelo olungafunekiyo, utshilo umkomishinala wamaxhoba. ...
Kutheni utshutshiso luncipha?
2021-06-20 12:42:10 | Entsha
Inani lodlwengulo oluxelwe kwiinkundla zaseNgilani naseWales liyaqhubeka ukwehla. ...